HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaUrszọ ursgbọ okporo ígwè Bursa Abụghị Ọsọ 'High Standard'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
rsagbọ okporo ígwè bursa abụghịzi ọkọlọtọ
Abali ken ka anyị na-agagharị na weebụsaịtị TCDD, anyị hụrụ onwe anyị na ibe mmemme Investment 2019. Ọzọkwa, ọ tụrụ anyị n'anya ịhụ ozi dị na peeji ahụ.
Ihe anyị hụrụ bụ nke a:
TCDD General Directorate 1 Na August 2019 mere ntụgharị nke ise na mmemme itinye ego.
N’ikwu ya, aha Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, nke etinyere na mmemme ahụ ka ụgbọ oloko na-agba ọsọ ruo n’August, agbanweela gaa Standardzọ Ọkwa Elu.
usoro ihe omuma ego a
Ná ndepụta ...
Ahịrị Ankara-Istanbul, nke ka na-arụ ọrụ ma mejupụtara Kayaş-Ankara-Sincan, Sincan-Esenkent, Esenkent-Eskişehir, Eskişehir Station Crossing, Eskişehir-İnönü, İnönü-Vezirhan, Vezirhan-Köseköy, ụgbọ elu kacha elu kacha elu, Közeköy kacha mma, kacha bụ kacha ụgbọ elu kacha elu, kacha nke kacha elu bụ kacha mma, kacha nke kacha elu bụ kacha elu, ụgbọ elu kacha elu kacha elu, Köseköy kacha mma, kacha nke kacha elu bụ kacha mma, kacha nke kacha elu kacha elu, kacha bụ kacha nke kacha elu, kacha bụrụ nke kacha elu. na elu.
Ankara-Sivas, Ankara-Polatli-Afyon-Usak-Manisa-Izmir na Yerkoy-Kayseri ahịrị ka etinyere na mpaghara ụgbọ oloko dị elu.
Anyị jụrụ ndị maara azụmaahịa a ihe ọ gbanwere aha Osmaneli-Bursa na inzọ -zọ Ọgba Elu-Elu dị ka thezọ Ọkwa Elu High na mmemme itinye ego.
Ọzọ, ọnụ ahịa dị elu nke iwu ụgbọ elu na-agba ọsọ pụtara. Ha kwuru, sị:
Yolcu Ma ụgbọ oloko na ụgbọ njem ga-arụ ọrụ na eriri Bursa. Ya mere, ebe a burula usoro ihe eji eme njem. "
"Otu a si n'ụdị ụgbọ oloko dị oke ọnụ wee tinye ya n'ụdị nke abụọ, usoro a na-ahụkarị ebe ụgbọ okporo ígwè na-ebu ndị njem na-arụkọ ọrụ."
N’ime usoro ụgbọ elu dị elu n’agbata usoro a na-ahụ maka njem ụgbọ njem abalị na abalị, ụgbọ oloko na-agba oke ọsọ ọsọ yana ụgbọ njem ndị nkịtị.
TCDD ga-eme nhọrọ site na-elele ọnọdụ nke ụbọchị na izu oke nke ụgbọ elu ọsọ na-adị.
Olile anya di. Mmezu nke olile anya ahu dabere na mkpebi nke ochichi.
Ego nde 3 kwesiri imefu na ijeri 2.1
1 nke TCDD General Directorate Dabere na usoro itinye ego 2019 tụgharịrị na Ọgọst, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli High Standard Railway Project nwere ahịrị kilogram 180.
Ihe omume ...
3, nke bụ nhatanha niile, ka atụrụ ọnụ iji tụọ nde TL. N'ime nke a, ijeri 1 nde 940 nde 508 puku na 2018, nde 252 nde 010 kwuru na 2019, na mmefu ọnụ ego ruru 2 ijeri 192 nde 518 puku pound.
A ga-ewu eriri ahịrị Yenişehir-Osmaneli ọzọ na eriri Bursa-Yenişehir site na nkwenkwe ụgha dị egwu.
Nzaghachi ngwa ngwa: ụgbọ ala kwụpụrụ ọzọ ọnwa na-abịa
Na kọlụm ndị a,… Anyị kwupụtara na Mọnde na ụnyaahụ na akagbuola mpịakọta maka nde 3 nde 2018 na 2 Eprel 520 maka ọrụ nkwenkwe ụgha Bursa-Yenişehir na ọrụ electromechanical na ọrụ Yenişehir-Osmaneli.
Na June 2018, a mara ọkwa dị nro, n'ihi ihe isi ike akụ na ụba ụwa, ọnụahịa ahụ adịlarịrị ijeri kilogram 4 tupu ịmalite.
Ọ dịghị mfe ịnwe mmụba dị otú ahụ. Ya mere, onye ọrụ ngo ahụ enweghị ike iwepụta ebe ahụ, usoro ahụ mere ka akagbuo nke ọnụ ọnụ.
Akụkọ banyere nzaghachi mberede ahụ si Serbia.
AK Party Bursa osote Dr. Recep Tayyip Erdogan na Belgrade ya na ndị otu AK Party. Mustafa Esgin ewu nke Turkey iche na Belgrade-Sarajevo Highway Transportation Minister Cahit Turhan groundbreaking ememe meghere obi kagbuo.
Followinggbaso ntinye Mịnịsta ahụ, ọ kọrọ ọganihu:
"A gaghị egbu oge, a ga-eme mkpọchi ahụ ọnwa na-abịa."
2 maka ụgbọ oloko Bursa nwere ebe ọrụ
N’ezie, Bursa Mmefu maka ụgbọ oloko Bursa, nke edegharịrị aha ya dị ka Standardlọ Ahịa Dị elu na mmemme itinye ego na-ekpughe ọnọdụ nke azụmahịa ahụ.
Mmemme ahụ, 2019 naanị 252 ijeri 10 nde na-emefu na-ahụ, na-ahụ ọnọdụ a na saịtị ahụ na-ewu ụlọ.
Ogologo oge, enwere naanị ọrụ ịwụsa na Demirtaş Viaduct na mpaghara Kazıklı nke Ring Road. Ya na onye ọrụ 4 rụkwara ọrụ. (omume - Ahmet Emin Yılmaz)
Mbighachi maka Njikọ okporo ụzọ dị elu na Europe 11 / 06 / 2019 Mbigharị aka maka Njikọ ụgbọ okporo ígwè dị elu nke dị na Europe: M. Cahit Turhan, Minista Ụgbọ njem na Akụrụngwa, Halkalı- Ibu nke nwere ikike nke Line Line okporo ígwè Kapıkule, Çerkezköy-Kapıkule ga-abawanyewanye na-ewu ụlọ ọrụ ahụ, a ga-eji 275 nde Euro rụọ ọrụ ahụ iji wuchaa ọrụ ahụ iji rụchaa ọrụ ahụ na-egosi na a ga-enweta nnukwu ụgbọ okporo ígwè na mba Europe. Minista Turhan, Halkalı-Kapịkule Rụọnụ n'Ịntanet ÇerkezköyN'okwu ya na ntinye aka nke nkwekọrịta nke ụlọ Kapıkule, o kwuru na obi ụtọ na-agbakwunye nnukwu ọrụ ndị dị ka Istanbul Airport, Marmaray Tube Crossing, Yavuz Sultan Selim Bridge, North Marmara Ala na Eurasia Tunnel.
President Altepe anaghị enweta okporo ụzọ dị elu, ọ bụghị ihe ọzọ ọzọ (Video) 12 / 03 / 2013 President Altepe Ugbu a Tram Metro adịghị ngwa ngwa na-azụ Bursa Mayor Recep ALTEPE, Konya nwere ike na-abịa na-agwa gị na gị usoro ... Ụgbọ oloko, Metro, Na-adịghị ngwa ngwa Anyị Na-ekwu kwuru. Ma Bursa na mba anyị nwere ike ịmepụta ihe niile site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ulo oru. Mba anyị nwere ihe mgbaru ọsọ, ya mere, anyị ga-eme ka ndị ọchịchị na ndị gọọmenti obodo nwee ihe ịga nke ọma. Anyị kwuru n'oge oge ntuli aka ma anyị mere ya. Mayor Tehir Bey onye isi obodo anyị nwere ike ileta obodo Konya Metropolitan Municipality. Ụgbọ mbụ anyị, gụnyere software, zuru ezu. Ọ natara akwụkwọ ya n'afọ gara aga ma nwee ike ịbanye ugbu a. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ụlọ ọrụ R & D. Imepụta Makine Makine
Ụzọ okporo ụzọ na okporo ụzọ okporo ígwè China na-arị elu ngwa ngwa 07 / 11 / 2017 Ọ bụ ezie na China nọ n'usoro mgbanwe nke a na-eme maka ịghọ ọganihu, ọ na-eme ngwa ngwa iji mee ka ihe eji eme njem ụgbọ ala. Akụkụ azụ nke usoro mmezi ihe a bụ ụzọ mgbapụ ọhụrụ na ụzọ dị elu. China emeela ihe karịrị otu puku kilomita 800 n'okporo ụzọ awara awara na ihe karịrị otu puku kilomita n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị elu, ka 10 kwuru, dịka ndị isi ụgbọ mmiri na-ekwu na Sunday. N'ikwu okwu n'ikike uzo elu uwa nke di na Wuhan, isi obodo Hubei China, Zhou Wei, bu onye isi oru nke Ministry of Transport, kwuru na na njedebe nke 2016, e nwere Xidim 805 puku 300 gafee China. Dịka Zhou si kwuo, ụyọkọ eriri 10 kachasị ogologo n'ụwa kachasị elu
Ụgbọ okporo ígwè dị elu na Trabzon abụghị ụgbọ okporo ígwè dị elu 26 / 03 / 2016 Trabzon: Ak Party Trabzon Province President Heydar Revi, Ụgbọ njem, Maritime Affairs na Communications zutere Binali Yildirim. Revi, Trabzon, ọrụ niile metụtara okporo ụzọ okporo ụzọ, Minista ahụ rịọrọ arịrịọ ma gwa ya. Onye isi ochichi nke ngalaba nke Ak Party Trabzon Haydar Revi, Ankara, na-eme nleta ọtụtụ ndị ọkachamara maka ọrụ ndị dị mkpa maka Trabzon. Otu n'ime nzukọ ndị a mere Minista Transport, Maritime Affairs na Communications Binali Yildirim. Revi kwuru, ile Anyị zutere Minista anyị Binali Yıldırım. Nzukọ a soro ndị MP, Mayor Metropolitan na Gọvanọ imiz
Mbighachi maka Njikọ okporo ụzọ dị elu na Europe
President Altepe anaghị enweta okporo ụzọ dị elu, ọ bụghị ihe ọzọ ọzọ (Video)
Ụzọ okporo ụzọ na okporo ụzọ okporo ígwè China na-arị elu ngwa ngwa
Ụgbọ okporo ígwè dị elu na Trabzon abụghị ụgbọ okporo ígwè dị elu
Nnukwu ọsọ agba na Bursa
Usoro nhazi ọsọ ọsọ na-agwụ site na Ọkara Tupu Bursa
Ọ bụghị Friday, Menderes
Enweghị ike ikwu okwu na ekwentị mkpanaaka na Istanbul Metro
Ijuputa n'elu ala abughi 3 pound